कसैका लागि सङ्गीत एउटा अभिव्यक्ति हुनसक्छ, कसैका लागि सङ्गीत एउटा पेशा, त कसैका लागि यो एउटा नशा । पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएका शास्त्रीय सङ्गीतदेखि पश्चिमका ब्लुज, हिपहप, र्‍याप, मेटलसम्म अनि लोकगीत देखि गजलसम्म सङ्गीतको आधार र आकार विश्वव्यापी छ ।
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठअसार ७, २०७७
जब हामी सपना देख्दैनौं, मस्तिष्कको कार्यगति लयबद्ध हुन्छ । तर सपना देख्न थालेपछि मस्तिष्कको अवस्था मध्यदिनमा जागा रहेको जस्तो रूपमा आउँछ तर शरीर भने पूर्णरूपमा हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । यो विरोधाभासी मस्तिष्कको अवस्थाले खोजकर्ताहरूलाई अचम्ममा पारेको छ ।
स्वामी आनन्द अर्हतजेष्ठ २४, २०७७
रियल क्लासमा क्लिनिकल सेटिङ्गमा मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई पढाई राखेको बानी परेकोमा भर्चुअल क्लासमा मज्जा नआउने रहेछ । रियल क्लासमा भाईबहिनीहरुले हल्ला गर्दा साइलेन्ट प्लिज वा शट अप भनिराखेको बानी मिस हुँदो रहेछ ।
प्रा. डा. सुमनराज ताम्राकारजेष्ठ १४, २०७७
आज विश्वमा अनिँदोपन एक महामारीका रूपमा देखिएको छ । यो दीर्घकालीन थकावटको परिणाम हो । वास्तवमा निद्रा राम्रो लाग्न पनि मानिसलाई शक्ति चाहिन्छ । शक्तिको अतिशय क्षयले मनुष्यको तन्त्रीय प्रणाली यस्तो दयनीय अवस्थामा पुग्छ कि तुरुन्तै विश्रामको अवस्थामा फर्किन सक्दैन ।
स्वामी आनन्द अर्हतजेष्ठ ११, २०७७
अर्कोतिर स्कुलले कक्षा नियमित चलाएकै छ । शिक्षकले पढाएकै छन् । महिनाको उत्तरार्धमा बिल पनि आउनेमा द्विविधा छैन ।
खगेन्द्र धमला जेष्ठ ८, २०७७
कोरोना महाव्याधिका कारण सबै क्षेत्रको भाँती सिनेमाको प्रडक्सन, पोस्ट–प्रडक्सन र प्रदर्शन पनि यतिबेला ठप्प छ । नेपालभित्रै सिनेमा बन्न थालेको भर्खर आधाशतक नाघेको छ । यो आधाशतकमा यसप्रकारको सन्नाटा र पज इतिहासमै पहिलोपटक हो ।
सङ्गीत श्रोताजेष्ठ ४, २०७७
नेपाली सिनेमाका निडर महिला
विश्व बजारका सिनेमासँग दाँज्दा नेपाली सिनेमा कमजोर लाग्छन् । यो सत्यले हामीलाई पीडा दिन्छ, हिनताबोध हुन्छ ।
सम्पदा मल्लजेष्ठ ४, २०७७
शरीरको गतिशीलताले हामीलाई अझ प्रतिकूल अवस्थामा बाँच्न सक्ने समर्थ प्राणी बनाउँछ ।
स्वामी आनन्द अर्हतजेष्ठ ४, २०७७
प्लास्टिकको प्रयोगले अनपेक्षित वातावरणीय समस्याका साथै साना केटाकेटीमा विविध किसिमका स्वास्थ्य जन्य समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । आजको युगमा प्लास्टिकलाई विकराल वातावरणीय एवं पर्यावरणीय प्रकोपका रूपमा लिइन्छ ।
हरिनारायण पण्डितजेष्ठ ४, २०७७
आनन्दको रहस्यमय सेतु–श्वास–प्रश्वास
परमात्माले भनेछन्, ‘मैले त तिम्रै मागअनुसार स्वतन्त्रता दिएको थिएँ, तर यति सानो कुरा पनि समाल्न सकेनछौं । अब उप्रान्त तिमीहरूबाट श्वासचाहिँ लिनेछु, अरू क्रियाकलाप आफैं गर्नू ।’ त्यसदिनदेखि मृत्युबाहेक जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उसको श्वास चलिरहेको छ ।
स्वामी आनन्द अहर्तवैशाख ३१, २०७७
घरबेटीले आधा भाडा मात्र लिने भने पछि राहत
दुध व्यवसायी डिल्लीराम बराललाई घरबेटीले सटरको मासिक भाडामा आधी मिनाहा मात्र गरेका छैनन्, अवस्था अनुकुल भएको बेला दिन भनेका छन् ।
जितेन्द्र साहवैशाख २२, २०७७
मनुष्यको यात्रा : भाइरसदेखि बुद्धसम्म
व्यायाम गरेको शरीरको बहुआयामि कार्यदक्षता राम्रो हुन्छ । सम्यक योगाभ्यासपछि शरीरमा रगतको रसायनिक परिवर्तन नाप्दा आत्मविश्वास हार्मोन भनिने टेस्टोस्टोरन हार्मोन २५ प्रतिशते बढेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
स्वामी आनन्द अर्हतवैशाख १८, २०७७
पार्किङ व्यवस्थापनको मारमा सेवाग्राही
‘जतिसक्दो चाँडो सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन खोजे पनि कार्यालयको यस्तो समस्याले गर्दा उचित सेवा–सुविधा दिन सकेका छैनौं ।’
राजेश दाइसँगै बसेर मलाई मेरा दिदी–बहिनीको हातबाट टीका लगाउन मन छ । यो मेरो सानैदेखिको रहर पनि हो । व्यक्तित्वको हिसाबले मलाई उहाँ असाध्यै मन पर्नुहुन्छ ।
दसैंका अवसरमा विभिन्न छुट अफर पाइने हुँदा एउटा बाइक किन्ने योजना छ । त्यसपछि त्यही बाइकमा भेडेटारको चिसो हावा खाँदै अनि धनकुटाको दृश्य नियाल्दै भोजपुर पुग्ने सपना छ ।
तीजमा तपाईंको नाममा कसैले व्रत बस्दा कस्तो लाग्छ ?
व्रत बस्दा लगभग दुई किलो स्याउ, दुई दर्जन केरा, पाँच गिलास दूध, पाँच गिलास चिया, चार गिलास लस्सी खान्छन् । अनि व्रत बस्दा पैसो मागेर झन् आयु घटाइरहेका हुन्छन् । कस्तो लाग्नु ? बरु भात नै खाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
देशमा एउटा न एउटा काण्ड रचेर सीधासाधा जनतालाई भुलाउने ठूलाबडाहरूले देश विकासलाई गति दिनुको सट्टा उल्टो गतिमा दौडाएको देख्दा झोक चल्छ ।